किन रुचाइएन ‘चच हुई’ ? – Shuva Bihani
२०७६ मंसिर १०, मंगलवार १८:०४ Shuva Bihani Team0
सानैमा आमा गुमाएको र बाबुबाट टाढा भएको एक युवकको मनोदशा कस्तो होला ? बाबुले जबरजस्ती विदेश पठाएका कारण हङकङ पुगेका युवाहरु ११ वर्षपछि फर्केर आउँदा नेपालप्रति कस्तो व्यवहार गर्लान् ? के उनीहरु नेपालमै हुर्केको जस्तो व्यवहार गर्लान् ?
वास्तविक जीवनमा कस्तो मनोदशा होला । त्यो फरक पाटो हो । तर, ‘चच हुई’ मा भने यो फिल्ममा रमाइलो किसिमले देखाइएको छ ।
आर्यन सिग्देल र भोलाराज सापकोटा ११ वर्षदेखि एउटा कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले कम्पनीमा पनि राम्रोसँग काम गर्दैनन् । सधै काम बिगार्ने प्रेम (आर्यन सिग्देल) र भोला (भोलाराज सापकोटा) लाई कम्पनीले कामबाट निकालिदिन्छ ।
जागीर छोडेपछि उनीहरुको भेट काशीराम (माओत्से गुरुङ)सँग हुन्छ । मोस्ट वान्टेड सूचीमा परेका काशीरामले उनीहरुलाई नेपाल फर्किन कन्भिन्स गराउँछ ।
छुट्ने बेलामा काशीरामले एक किताब उपहार दिन्छ । त्यसपछि बाबु खोज्न निस्केका युवा एक किताबको चक्करमा फस्छन्, यही विषयलाई कथानक बनाइएको छ ।
व्यवसायिक रुपमा सफल बन्न नसकेको यो फिल्मले समीक्षा पनि राम्रो पाउन सकेन । आखिर किन रुचाइएन त यो फिल्म ? कारण खोजौँ ।
निर्देशक साम्तेन भुटिया राम्रा निर्देशक मानिन्छन् । उनले यसअघि निर्देशन गरेका फिल्मले समीक्षा राम्रो पाएका थिए । तर, ‘चच हुई’ मा भने साम्तेन चुकेका छन् । फिल्मको कथा कमजोर छ । सामान्य कथालाई कमेडी शैलीमा तयार पार्न खोजे पनि फिल्ममा नै कमेडी छैन ।
एकाध संवादले बाहेक फिल्ममा हँसाउने खुराक त्यस्तो केही छैन । फिल्मका प्लट पनि शक्तिशाली लाग्दैनन् । संवादले दर्शकको मन जित्दैन ।
नेपाली जुन फिल्म हेर्दा पनि कलाकारको अभिनय उस्तै हुन्छ । ती पात्र र चरित्रलाई मेकरले फरक रुपमा जीवित बनाउन खोज्दैनन् । कलाकार जस्तो देखिन्छ, उस्तै खालको भूमिकामा कलाकारलाई देख्न सकिन्छ ।
‘चच हुई’ मा आर्यन सिग्देल मात्र होइन, भोलाराज सापकोटा, मिरुना मगरलाई पनि सामान्य भूमिकामा देखाइएको छ । जस्तो यी कलाकार पहिले अन्य फिल्ममा हुन्थे । त्यो बाहेक फिल्ममा नयाँपन केही छैन । अभिनयमा नयाँपन छैन । चरित्र उस्तै छ । राम्रो अभिनय गर्न सक्ने कलाकारलाई लिएर पनि साम्तेनले अभिनय गराउन भने सकेका छैनन् । बरु माओत्से गुरुङको काम केही फरक छ ।
स्टारडम र प्रचार
हुन त आर्यन सिग्देलले आफू नम्बर वान अभिनेता हुन यो क्षेत्रमा नआएको बताउँदै आएका छन् । ‘चच हुई’ मा आर्यनको स्टारडम देखिनुपर्ने हो । फिल्मको त्यही अनुसार चर्चा हुनुपर्ने हो । तर, फिल्ममा न त आर्यनको क्रेज देखिन्छ, न त रिलिजअघि प्रचार पनि त्यसरी नै गरिएको थियो ।
केही समययता फिल्म चलाउन पनि खुलेर प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि, फिल्मबीच प्रतिस्पर्धा धेरै छ ।
दर्शकलाई अहिले कुन फिल्म हलमा चलिरहेको छ भन्ने नै मतलब हुन छोडेको छ । यो फिल्म एक तहमा राम्रो बनेर पनि नचल्नुको कारण यसको प्रचार नै पर्याप्त नहुनु हो । नेपालमा योभन्दा पनि कमजोर फिल्म हेर्न हलसम्म दर्शक ओइरिएका उदाहरण पनि छन् ।
साम्तेन भुटियाको काम फिल्ममा खासै देखिँदैन । कलाकारको अभिनयमा दम नहुनुको कारण निर्देशकीय कमजोरी पनि हो । उनले फिल्मलाई कस्तो बनाउने भनेर पक्कै पहिले नै खाका बनाएका थिए । तर, त्यो फिल्म त्यति शक्तिशाली भएन ।
निर्देशक साम्तेन भुटियाले फिल्मलाई व्यावसायिक बनाउने धाउन्नमा फिल्मको मूल्य मान्यता नै भुलिदिएको भान हुन्छ ।
यी बलिउड कलाकार, जसले स्कुल गएर पढेनन्
२०७६ मंसिर १०, मंगलवार ०७:१८ Shuva Bihani Team
२०७६ मंसिर १०, मंगलवार १८:४० Shuva Bihani Team